Vaovao - Ny fiantraikan'ny plastika: Sambany no hitan'ny mpahay siansa tao anaty ran'olombelona ny plastika bitika!
Na avy any amin'ny ranomasina lalina ka hatrany amin'ny tendrombohitra avo indrindra izany, na avy amin'ny rivotra sy ny tany ka hatrany amin'ny rojo sakafo, dia efa misy fako microplastika saika manerana ny tany.Ankehitriny, maro kokoa ny fanadihadiana no nanaporofo fa ny plastika bitika dia "nanafika" ny ran'olombelona.
madinika sambany no nahitana plastika tao anaty ran'olona!
Matetika ny poti-plastika latsaky ny 5mm ny savaivony dia antsoina hoe "plastika micro", ary ny habeny dia sarotra ho antsika ny mahita ny fisiany.
Vao haingana, ny fandinihana iray navoaka tao amin'ny gazety iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana dia mampiseho fa ny mpahay siansa no nahita voalohany ny fandotoana plastika madinika ao amin'ny ran'ny olombelona.Ny fandinihana teo aloha dia nahitana microplastika ao amin'ny tsinainy, placenta amin'ny zaza ao am-bohoka ary ny diky ny olon-dehibe sy ny zaza, fa ny microplastics dia tsy hita ao amin'ny santionan'ny ra.
Ny fandinihana dia nandinika santionan'ny rà avy amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo 22 tsy fantatra anarana ary nahita fa ny 77% amin'ireo santionany dia misy microplastics miaraka amin'ny salan'isa 1,6 micrograms isaky ny milliliter.
Karazana plastika dimy no nosedraina: polymethylmethacrylate (PMMA), polypropylene (PP), polystyrene (PS), polyethylene (PE) ary polyethylene terephthalate (PET).
PMMA, fantatra ihany koa amin'ny hoe acrylic na plexiglass, dia matetika ampiasaina amin'ny endriky ny fitaovana elektronika sy ny jiro.
PP dia ampiasaina betsaka amin'ny boaty takeout, boaty fitahirizana vaovao ary tavoahangy ronono sasany.
Ny PS dia ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana famonosana sakafo fanary.
Ny PE dia matetika ampiasaina amin'ny sarimihetsika fonosana sy harona plastika, toy ny kitapo fitahirizana vaovao sy sarimihetsika fitahirizana vaovao.
PET dia matetika ampiasaina amin'ny endriky ny tavoahangy rano mineraly, tavoahangy zava-pisotro ary kojakoja isan-karazany.
Nasehon'ny valiny fa eo amin'ny antsasaky ny santionany amin'ny ra dia misy dian-plastika PET, mihoatra ny ampahatelon'ny santionany amin'ny ra misy PS ary eo amin'ny ampahefatry ny santionan'ny ra misy PE.
Ny tena mahagaga dia ny mpikaroka dia nahita karazana plastika bitika telo samihafa tao anaty santionan'ny ra.
Ny habetsahan'ny poti-plastika amin'ny santionany 22 dia nozaraina tamin'ny karazana polymère
Ahoana no hidiran'ny microplastique ao anaty rà?
Ny fikarohana dia mampiseho fa ireo plastika bitika ireo dia mety hiditra ao amin'ny vatan'olombelona amin'ny alàlan'ny rivotra, rano na sakafo, na amin'ny alàlan'ny toothpaste, lokomena ary ranomainty tatoazy.Ara-teorika, ny poti-plastika dia azo entina amin'ny lalan-drà mankany amin'ny taova isan-karazany manerana ny vatana.
Nilaza ny mpikaroka fa mety misy karazana microplastika hafa ao amin'ny ra, saingy tsy hitany ny singa lehibe kokoa noho ny savaivony ny fanjaitra santionany amin'ity fanadihadiana ity.
Na dia tsy mazava aza ny fiantraikan'ny plastika bitika amin'ny fahasalaman'ny olombelona, ​​manahy ny mpikaroka fa mety hanimba ny selan'olombelona ny plastika bitika.Teo aloha dia hita fa miditra ao amin’ny vatan’olombelona ny poti-drivotra maloto ary miteraka fahafatesana aloha loatra an-tapitrisany isan-taona.
Aiza ny lalana hivoahana amin'ny fandotoana plastika?
Far East GeotegrityPulp fiarovana ny tontolo iainana tableware dia nahazo fiderana ambony eny an-tsena noho ny toetra mampiavaka sy ny fiarovana ny tontolo iainana fomba isan-karazany ny akora,fanimbana mora, famerenam-bola sy fanavaozana, izay mampiavaka azy amin'ireo karazana solon-javatra plastika rehetra.Ny vokatra dia mety ho simba tanteraka amin'ny fanjakana voajanahary ao anatin'ny 90 andro, ary azo ampiasaina amin'ny compost ao an-tokantrano sy indostrialy.Ny singa fototra aorian'ny fanimbana dia ny rano sy ny gazy karbonika, izay tsy hamokatra ny sisa tavela amin'ny fako sy ny loto.
Lavitra Atsinanana .Geotrgrity fiarovana ny tontolo iainana fonosana sakafo (fitaovana latabatra) vokatra mampiasa mololo fambolena, vary sy varimbazaha mololo,faryary ny bararata ho akora fototra hahatanteraka ny tsy fandotoana syangovo-mamonjyfamokarana sy fanodinana angovo madio.Nandalo ny fanamarinana iraisam-pirenena 9000;14000 fanamarinana fiarovana ny tontolo iainana, nandalo ny fisafoana iraisam-pirenena sy ny fitsapana ny FDA, UL, CE, SGS sy ny Japoney Minisitry ny fahasalamana sy ny fiahiana any Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana, tonga ny fenitra iraisam-pirenena momba ny fahadiovana sakafo fonosana, ary nahazo ny anaram-boninahitra ny "Ny vokatra tompon-daka voalohany an'i Fujian amin'ny indostrian'ny famokarana".
Amin'ny maha loza mitatao eran-tany, ny fandotoana plastika dia miteraka loza mitatao ho an'ny fahasalaman'ny olombelona amin'ny endrika plastika bitika sy akora simika misy poizina.Far East Geotrgritymanana herim-po handray andraikitra ara-tsosialy amin'ny orinasa, mifikitra amin'ny fanavaozana siantifika sy teknolojia ary mampiroborobo ny anton'ny kojakoja maitso!Mba hamela izao tontolo izao madio sy tsara tarehy ho an'ny taranaka ho avy, ny Far East Geotegrity dia hanohy hiara-miasa sy hiara-miasa amin'ny olona manam-pahalalana eo amin'ny indostria miaraka amin'ny faniriana sy ny hetsika mba handresena amim-pahavitrihana ny fandotoana plastika, hanao ezaka tsy an-kijanona hampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra ny olombelona ary hanangana vondron'olona iray. fiainana eo amin’ny olona sy ny zavaboary.